ဘုရား ဘုရား။ဒါကြီးက တကယ်ကြီးလား(လန့်တတ်သူများ မကြည့်သင့်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ဘုရား ဘုရား။ဒါကြီးက တကယ်ကြီးလား(လန့်တတ်သူများ မကြည့်သင့်)
ဘုရား ဘုရား။ဒါကြီးက တကယ်ကြီးလား(လန့်တတ်သူများ မကြည့်သင့်)
Posted by alinsett on Oct 17, 2014 in Critic, My Dear Diary, Myanma News, News | 19 comments
make sure you don’t ԁο no matter what аѕ thіѕ thіѕ іѕ whу world hаνе tο еnԁ.
အင်တာနက်ထဲ..ဟိုဟို ဒီဒိ သွားရင်း…အဲဒါကြီး…သွားတွေ့လို့… မ လာပြီးးး
အော်… ဒလီ ဆန်တယ်… နှလုံး သိပ်မကောင်းဘူး…
စက်တင်ဘာ ၁၄ ။
မြန်မာနိုင်ငံက လူကုန်ကူးခံရသူ အများစုဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ရောင်းစားခံနေကြရတာဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော် သင်္ဂဟဟိုတယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လူကုန်ကူး ခံရသူ အများစုဟာ တရုတ်နိုင်ငံကို ရောင်းစားခံ နေကြရတာဖြစ်တယ် လို့ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကို က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက နေပြည်တော် သင်္ဂဟဟိုတယ်မှာ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားမှာ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုက အခုလို ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ပြဌာန်းထားခဲ့ တဲ့ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဟာဥပဒေဟာ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတော့တဲ့အတွက် ပြန် လည်ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသွားပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအစီရင်ခံစာပါ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက် တဲ့ ထောက်ခံအကြံပြုချက် (၁၃) ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀န်ကြီးဌာနတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးက အားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်း ၀န်ကြီးက တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူကုန်ကူးမှု ၇၂ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တရားခံ ၂၁၁ ယောက်ကိုအရေးယူခဲ့သလို လူကုန်ကူးခံရသူ စုစုပေါင်း ၁၀၅ ယောက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
စက်တင်ဘာလတုန်းက ဖတ်ရတဲ့ သတင်းလေးပါ… ။
တကယ်ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ အင်တာနက်မှာ ပေါက်ကရသတင်း
တွေ ဖွကြတာပါ။ တကယ်က အဲဒီမှာ လူ့ ကလီစာ တွေက စားဖို့ရောင်း
တာဟုတ်ဘူး။ ထရန်ပလန့်စ် ပြန်လုပ်ပြီး အစားထိုးဖို့ ဖြစ်မယ်။
ကော့မန့်တွေ အရင်ကြည့်ပြီး ဝင်မလာတော့ဘူးနော်။
မမဂျီးက ကလီစာဟင်း သိပ်ကြိုက်တာ နောက် မစားနိုင်မှာ စိုးလို့။
မောင်လေးလှိုင် ကို မမဂျီး ဖွဘုတ်မှာ မတ်စိ ပို့ထားပါတယ် ကွီ။
ဂု တလော ….
သများ အသီးနှလုံးတွေ သိပ်မကောင်းလို့
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ စားသောက်စရာ ကိစ္စလေးတွေပဲ တင်ကြပါလားငင်???
ခေါင်းစဉ်မှာ ပုံ တွေ အတွက် သတိပေးစာလေး ရေးသင့်သလား ဘဲ ဆက်ဆက်ရေ။
သွေးနှင့် လူသေ ပုံများပါသည်။ သွေးလန့်တတ်သူများ မကြည့်ပါနှင့်။
အဲဒါဆို အရီး ရှေ့ဆုံးက ရှောင်မှာ။ :))
transplant ကိစ္စ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒါလောက် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးဆိုတော့ သတိပေးစာလည်း မလိုဘူးထင်ပါတယ်။
ဗျို့ သဂျီး သဂျီး တစ်ခုခု ပြောပါ။ အဲဒီသတင်း အစစ်လား အတုလား။
သဂျီး သိပါတယ်နော်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူကုန်ကူးစာရင်းအမြင့်ဆုံးက မြန်မာကနေ တရုတ်ကို ပို့တာပါ။ သတို့သမီး ကိစ္စအတွက်ဆို ထားပါတော့။ ဒီဟာကြီးက ဘာဖြစ်လို့ ရဲတွေ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာလဲ။ ဒီသတင်း အမှန်ဆိုရင်တော့ ဧရာမ အမျိုးသားရေးကိစ္စကြီး။ လူဦးရေစာရင်းကောက်တုန်းက လူ ၆သန်းလောက် ပျောက်နေတဲ့ ကိစ္စကြီးလည်း ရှိသေးတယ်။
ဒီသတင်း အစစ်အတု သိချင်ပါတယ်။
အံမယ်… ။ သူကြီး…
မယုံဘူး ။ လုပ်ပြ ၊
ဒါကို.. အီးမေးတွေနဲ့ဖွ..။ ကြားထဲက..အမှန်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့.. ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြသူတွေပါရှိနေရင်တော့.. အယ်ဒီတာကို.. အရေးယူသင့်..။
‘Cannibalism’ as art
In any case, it’s difficult to tell — and under dispute — whether photographs circulating online since December 2000 which appear to show an Asian man cooking and eatingahuman fetus are real or fake. We do know, thanks to documentation provided on Chinese-Art.com, that they were the work ofaconceptual artist named Zhu Yu. The photos were exhibited at an underground art show after being rejected as “too controversial” by curators of the Shanghai 2000 Bienniale. For those who haven’t seen them and aren’t too squeamish to takeapeek, here are two examples from Zhu’s postmodern performance piece, aptly titled “Eating People,” collected from forwarded emails:
Zhu Yu “Eating People” #1
Zhu Yu “Eating People” #2
The artist himself, whose past accomplishments include an opus called “Canned Human Brains,” has claimed in interviews that he used real aborted fetuses stolen fromamedical school to create the piece, and that he actually cooked and ate the fetuses “for art’s sake.”
ဒါကြီးတွေဟာ အနုပညာပစ္စည်းအဖြစ် ကျနော် လက်ခံတယ်
ရသ အနေနဲ့ထုတ်ကြည့်ရင် ရွှ့ရှာစက်ဆုပ်ခြင်းကို စကားထဲထည့်မပြောဘူး
ကြောက်ရွှံ့ခြင်းနဲ့ အံ့သြဖွယ်ရသတွေ ရမယ်ပေါ့။
ဒါမယ့် အခုတလောဟပိုစ့်မော်ဒန်အငွေ့အသက်ကို ခြုံပြီး ကျနော် ကြွေးကြော်မှာကတော့
ရသ မြောက်မှ အနုပညာမဟုတ်
ရသ ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ အနုပညာဟာ အနုပညာ
အဲ့ဒီအယူအဆကို တိတ်တိဆိတ် ထုတ်ဖော်ရေးသားထားတဲ့
အခုတလော အဆဲမခံနိုင်သေးလို့ မတင်ပြဖြစ်သေးတာ
ရှေးရိုးစဉ်လာ အနုပညာဘိုးအေကြီးတွေနဲ့ ကျနော်
အယူအဆ အိုးစားကွဲကိန်း မြင်နေလို့. . .